Celebrity – Page 65 – Shwe Sar
ပုရိသ တို့ရဲ့ အချစ်တော် လုလုအောင် ရဲ့ ကျော်ကြား ခဲ့သော အလန်းစား ပုံရိပ်များ
မော်ဒယ် လုလုအောင်ကတော့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကို အခိုင်အမာ ရယူထားနိုင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အောင်မြင်လျက် ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်တစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျ။ မိန်းကလေးတိုင်းအားကျရတဲ့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်ကောက် ကြောင်းအလှကို ရရှိ ပိုင်ဆိုင်ထားနို င်ခဲ့တဲ့ […]
By Shwe S NPosted on October 19, 2021
ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှတရားတွေကို အသားပေးထားတဲ့ သူမရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုပြင်း တဲ့ ပုံရိပ်တွေက လည်း ပုရိသတွေ ကို ရင်တွေ တလှပ်လှပ်ခုန်သွားအောင် ဖမ်းစားနိုင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။အဆီပိုမရှိပဲ သွယ်လျကျစ်လစ်တဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာ ကြောင့် ဘယ်ဖက်ရှင်နဲ့ မဆိုလိုက် ဖက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ချစ်ပရိသတ်ကြီးတွက် မိုးပွင့်ဖြူ […]
ပုံလေးတွေတိုင်း မှာ မော်ဒယ်မျက်ဝန်း တစ်ယောက် ဆွဲဆောင်မှု ရှိရှိနဲ့ လန်းလွန်းနေတာ လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ ခပ်ချေချ ရိုက် ထားတဲ့ ပုံလေးကို ” ပါးကွက်လေးပါ ပျက်သွားတဲ့ထိ တရှိုက်မက်မက် နမ်းမယ့်သူ ??” caption လေးတဲ့ […]
၅၀၅ (က) လွတ်အောင် လက်မှတ်ထိုးမယ့်အထဲ သူမ မပါဘူးဟုဆိုခဲ့ဖူးတဲ့ သရုပ်ဆောင် နွယ်ဒါလီထွန်း အပြောနဲ့အလုပ်မညီလို့ ပရိသတ်ဝေဖန်ခံနေရ – သရုပ်ဆောင် နွယ်ဒါလီထွန်းကတော့ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ လူထုလှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပြည်သူတွေနဲ့အတူ လမ်းပေါ်ထွက်ပြီး ဆန္ဒပြခဲ့တာကြောင့် စစ်ကောင်စီဘက်မှ […]
ဂီတာရှိတ်ခန္ဓာကိုယ်လေးမှာ လှပလွန်းတဲ့ ဖက်ရှင်လေးဝတ်ပြီး ထိထိမိမိ ညှို့ယူဖမ်းစားလိုက်ပြန်တဲ့ မေပန်းချီ
အောင်မြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်မင်းသမီး တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ မေပန်းချီ ကတော့ အမိုက်စားခန္ဓာကိုယ်နဲ့ ပုရိသတွေကို တဖြုတ်ဖြုတ်ကြွေသွားလောက်စေတဲ့ အလှတွေနဲ့ ဆွဲဆောင်နေတဲ့ မင်းသမီးတစ်ဦးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အလန်းစားဖက်ရှင်တွေနဲ့ ပီပြင်တဲ့ သရုပ်ဆောင်ချက်ေ တွကတော့ မေပန်းချီ ရဲ့ အလှတွေကို ထင်ဟပ်ပြနေပါတယ်။ […]
အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေး နဲ့ အရမ်း ကို လန်းလွန်း နေတဲ့ မမ J NAW
မော်ဒယ်မလေးJ Naw ပုံလေးတွေဟာ ကြည့်ရှုသူတွေ များပြားခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး ပုရိသတွေအများဆုံး ဝန်းရံခြင်းခံနေရတာလည်း ဖြစ်ပါ တယ်။ပုံလေးတွေတိုင်းက ဆွဲဆောင်မှုရှိရှိနဲ့ ကြွေရုပ်လေး လို လှရက်လွန်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်အလှ ကတော့ မြင်သူတိုင်း ငေးလောက်အောင်ကို ညို့ယူဖမ်းစားနေတာ […]
အလန်စား ပိုစ့်တွေ ပေးနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် ဖြူသိင်္ဂကျော်
ပုံလေးတွေတိုင်း မှာ ဖြူသိင်္ဂကျော် တေစ်ယောက် ဆွဲဆောင် မှု ရှိရှိ နဲ့ လန်းလွန်းနေတာ ည်းဖြစ်ပါတယ်။သူမကတော့ ခပ်ချေချရိုက်ထားတဲ့ ပုံလေးကို “ကျောင်းတွေမဖွင့်သေးလို့လည်နေသူလေး ” caption လေးတဲ့ တင်ပေးလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်၊၊ ဖြူသိင်္ဂကျော် ရဲ့ အလှ […]
မင်းသ.မီးချော သင်ဇာ.နွယ်ဝင်း.ကတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့အပြုံးနဲ့အ.တူ မြန်မာ.ဇာတ်လ မ်းတွေ.မှာလည်း ကျ.ရာနေ ရာ.ကနေ ပါဝင်.သရုပ်ဆေ.ာင်နိုင်တာကြောင့်…. ပရိသတ်.တွေကချစ်ခင်အားပေးနေကြတာ ဖြစ်ပ.ါတယ်နော်သူမက.တော့အနုပညာ.လမ်းကြောင်း.ပေါ်မှာလျှောက်လှမ်းနေရ.င်းနဲ့ပဲ အိမ်.ထောင်ပြုပြီး… သားသမီ.းလေးတွေနဲ့အ.တူ သာ.ယာတဲ့မိသ.ာ.းစုဘဝ.လေးကိုပိုင်.ဆိုင်.ထားသူ.လည်း ဖြစ်ပ.ါတ.ယ်နော်သူမရဲ့အမျိုးသာ.းကလည်း.အောင်မြ.င်တဲ့စီး.ပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ်.ယောက်ဖြစ်တာ.ကြောင့်… စီးပွားရေ.းကိုလည်း အပူအပ.င်မရှိဘဲအေးချမ်.းစွာနေထိုင်နိုင်သူ ဖြစ်.ပါ.တယ်နေ.ာ်မြန်မာနိုင်ငံမှ.ာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့.အခြေအ.နေကြားမှာ… သူမ.တို့မိသား.စုက တိ.တ်ဆိ.တ်လွန်းလို့ ပြည်သူ.ပရိသတ်တွေရဲ့ဝေဖန်.မှုဒဏ်.တွေကိုလ.ည်း […]
မြန်မာဝတ်စုံလေးနဲ့ ကောက်ကြောင်းအလှပေါ်လွင်လွန်းနေတဲ့ မျက်ဝန်း ရဲ့ ပုံရိပ်များ
မြင်သူ တိုင်းငေးလောက် တဲ့ အမိုက်စား ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှကို ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ မော်ဒယ်လ်မျက်ဝန်း ကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်နော်။ မော်ဒယ်လ်လောကကိုဝင်ရောက်တာ မကြာသေးပင်မဲ့ ပရိသတ်အများအပြားရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကို တဖြည်းဖြည်းရရှိလာတဲ့ မော်ဒယ်ဖြစ်ပါတယ် ယောကျာ်းလေး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝန်းရံအားပေးမှုရရှိထားတဲ့သူမကတော့ social media လောကမှာ […]
ခင်အင်ကြင်းကျော်ဟာ အလန်းစားဖတ်ရှင်တွေနဲ့အတူ မြန်မာပြည့်ကြီးရဲ့ယောင်္ကျားထုကြီးကို ဖက်ရှင်အဆန်းတွေလှပတဲ့ ကောက် ကြောင်းအလှတွေနဲ့ဆွဲဆောင်ထားနိုင်သူဖြစ်ပါတယ်။သူ့ကိုချစ်တဲ့ပရိတ်သတ်တွေအတွက်ကြည့်ရှူသူတိုင်းရင်တဒိတ်ဒိတ်ဖြစ်သွားစေ့မယ်ခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းအလှပုံလေးတွေလည်းင်ပေးလိုက်ကပြီးအားပေးကြပါဦးနော်။ ကို ယ်လုံးကိုယ်ပေါက် လှလှလေးနဲ့ အရမ်းချစ်စရာကောင်းတဲ့ ခင်အင်ကြင်းကျော်ဟာ သူမရဲ့အလှတွေကို ထင်ရှာပေါ်လွင်အောင် ဓါတ်ပုံ ရိုက်ကူးလေ့ရှိပါတယ်။သူမ ကတော့အနုပ ညာအ လုပ်တွေ အနေနဲ့ကြော်ငြာဓာတ်ပုံတွေအများဆုံးရိုက်ကူးနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူ […]